အနုပညာအလုပ်တွေကို ခုလိုအချိန်မှာဘာအပူအပင်မှမရှိပဲ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့သူတွေကို ထိထိမိမိပြောလိုက်တဲ့ အကယ်ဒမီ သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေး – Cele Top Stars
အနုပညာအလုပ်တွေကို ခုလိုအချိန်မှာဘာအပူအပင်မှမရှိပဲ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့သူတွေကို ထိထိမိမိပြောလိုက်တဲ့ အကယ်ဒမီ သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေး
November 9, 2021 By admin2News
ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေအနုပညာလောကမှာရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကောင်းပေါင်းများစွာကို ကျရာ.ဇာတ်ရုပ်တိုင်းမှာပီ.ပြင်ပိုင်နိုင်စွာ.သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့.အတွက်အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုကြီး ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီမင်းသမီးချောလေး ဖွေးဖွေး ဟာဆိုရင်အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အနုပညာလမ်.းကြောင်းမှာအောင်.မြင်လာ.ခဲ့တာ ယနေ့ထိတိုင်ပ.ါပဲနော်။ အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ.တွေမှာဆိုရင်. လည်းဖွေးဖွေး ကပြည်သူလူထုနဲ့တစ်သားတည်း ရပ်.တည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
အဲ့ဒီလို လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် ပုဒ်.မ၅၀၅(က)နဲ့ဝရမ်းထုတ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင် ဖွေးဖွေး က ကျွ.န်မကတိ.တည်ခဲ့ပ.ါတယ်နော်၊ဖွေးရွေးချယ်မှုတိုင်း ကိုSupportလုပ်.ပြီး စောင့်ရှေက်ပေးခဲ့သူတွေကိုလဲကျေးဇူးဆပ်ချင်လှပါပြီ၊ သူမျ.ားတွေတချို့ပုံမှန်တ.ကယ်ပြ.န်ဖြစ်.နေသလိုလိုပျော်ပါး နေတာတွေအလုပ်တွေ ပြန်လုပ်နေ တာတွေ ကြည့်မိရင်လဲအတွေး.တွေကိုအဲ့မှာပဲရပ်လိုက်ပါ၊ အတွေ.းထဲစိတ်.ထဲကသူတို့.ကိုလွှတ်.ထားလိုက်ပါ။ စိတ်ဓာတ်မကျ.ပါနဲ့။
ကိုယ့်.ရွေးချ.ယ်မှုအတွက် အမြဲ.လိပ်ပြာလုံပြီး ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ၊ Our Time Will Come Again 100% Sure။ ပုံမှန်ပြန်.ဖြစ်တဲ့နေ့ မှကျွန်မ.သိပ်ချစ်တဲ့.အလုပ်.တွေကိုကျွန်မ.ကိုချစ်.တဲ့သူ.တွေနဲ့၉၀.ဆတိုးကြိုးစ.ားမယ်လို့ကိုယ့်.ကိုယ်ကိုကတိပေ.းရင်အားပြ.န်တင်းလိုက်ပါ.တယ်ဆိုပြီးရေ.းသား​ဖော်ပြထားပါတယ်၊ စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးများ အတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်.ပေးလိုက်ပ.ါတယ်နော်။ မြန်မာပြည်ကြီးလဲအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပြီးဖတ်​ရှု့​ပေးကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူ/သားများအားလုံးစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်က​နေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်း​ပေးလိုက်ရပါတယ်…။
ခဈြလှစှာသော ပရိသတျကွီးရအေနုပညာလောကမှာရုပျရှငျနဲ့ ဗီဒီယိုဇာတျကောငျးပေါငျးမြားစှာကို ကရြာ.ဇာတျရုပျတိုငျးမှာပီ.ပွငျပိုငျနိုငျစှာ.သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့.အတှကျအကယျဒမီထူးခြှနျဆုကွီး ကို ထိုကျထိုကျတနျတနျ ရရှိခဲ့တဲ့အကယျဒမီမငျးသမီးခြောလေး ဖှေးဖှေး ဟာဆိုရငျအောငျမွငျမှုတှနေဲ့အနုပညာလမျ.းကွောငျးမှာအောငျ.မွငျလာ.ခဲ့တာ ယနထေိ့တိုငျပ.ါပဲနျော။ အခုလကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ နိုငျငံရေးအခွအေနေ.တှမှောဆိုရငျ. လညျးဖှေးဖှေး ကပွညျသူလူထုနဲ့တဈသားတညျး ရပျ.တညျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ…။
အဲ့ဒီလို လူထုလှုပျရှားမှုမှာပါဝငျခဲ့တဲ့အတှကျ ပုဒျ.မ၅၀၅(က)နဲ့ဝရမျးထုတျခံခဲ့ရတာလညျးဖွဈပါတယျနျော။ သရုပျဆောငျ ဖှေးဖှေး က ကြှ.နျမကတိ.တညျခဲ့ပ.ါတယျနျော၊ဖှေးရှေးခယျြမှုတိုငျး ကိုSupportလုပျ.ပွီး စောငျ့ရှကျေပေးခဲ့သူတှကေိုလဲကြေးဇူးဆပျခငျြလှပါပွီ၊ သူမြ.ားတှတေခြို့ပုံမှနျတ.ကယျပွ.နျဖွဈ.နသေလိုလိုပြျောပါး နတောတှအေလုပျတှေ ပွနျလုပျနေ တာတှေ ကွညျ့မိရငျလဲအတှေး.တှကေိုအဲ့မှာပဲရပျလိုကျပါ၊ အတှေ.းထဲစိတျ.ထဲကသူတို့.ကိုလှတျ.ထားလိုကျပါ။ စိတျဓာတျမကြ.ပါနဲ့။
ကိုယျ့.ရှေးခြ.ယျမှုအတှကျ အမွဲ.လိပျပွာလုံပွီး ဂုဏျယူလိုကျပါ၊ Our Time Will Come Again 100% Sure။ ပုံမှနျပွနျ.ဖွဈတဲ့နေ့ မှကြှနျမ.သိပျခဈြတဲ့.အလုပျ.တှကေိုကြှနျမ.ကိုခဈြ.တဲ့သူ.တှနေဲ့၉၀.ဆတိုးကွိုးစ.ားမယျလို့ကိုယျ့.ကိုယျကိုကတိပေ.းရငျအားပွ.နျတငျးလိုကျပါ.တယျဆိုပွီးရေ.းသား​ဖျောပွထားပါတယျ၊ စာဖတျပရိသတျကွီးမြား အတှကျပွနျလညျတငျဆကျ.ပေးလိုကျပ.ါတယျနျော။ မွနျမာပွညျကွီးလဲအမွနျဆုံးငွိမျးခမျြးပွီးဖတျ​ရှု့​ပေးကွတဲ့ မွနျမာပွညျသူ/သားမြားအားလုံးစဈအာဏာရှငျလကျအောကျက​နေ အမွနျဆုံးလှတျမွောကျကွပါစလေို့ဆုတောငျး​ပေးလိုကျရပါတယျ…။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားငယ်လေးကို ဒီနေ့မှာအောင်မြင်စွာ မွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်
သားဦးရတနာလေးကို နိုဝင်ဘာလ(၈)ရက်နေ့မှာ အောင်မြင်စွာနဲ့မွေးဖွားနိုင်ခဲ့လို့ အတိုင်းမသိပျော်ရွှင်နေတဲ့ မော်ဒယ် အောန်ဆိုင်းတို့ဇနီးမောင်နှံ